Vabereki Vangu Havavimbi Neni | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Belize Kriol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingaita Sei Kuti Vabereki Vangu Vavimbe Neni?
Kana ukaratidza kuti wakavimbika vabereki vako vachavimbawo newe. Kuteerera vabereki vako kwakafanana nekubhadhara chikwereti chaunenge watora kubhengi. Kana ukaratidza kuti wakavimbika uchawedzera kuvimbwa newe.
Zvinotora nguva kuti vabereki vako vazovimba newe. Unofanira kutanga waratidza kuti uri munhu anoziva zvaanoita kuti vabereki vako vawedzere kukupa rusununguko.
NYAYA YAKAITIKA: “Pandaiyaruka, ndainyatsoziva zvaidiwa nevabereki vangu, saka ndainyepedzera kuvateerera asi nerweseri ndichiita zvandinoda. Izvozvo zvakaita kuti vabereki vangu vasavimba neni. Ndakazoona kuti kana usina kuvimbika haupiwi rusununguko. Kana uchida kuti vabereki vako vavimbe newe unofanirawo kuva akavimbika.”—Craig.
Taura chokwadi kunyange pazvinenge zvakaoma. Munhu wese anombokanganisa, asi ukanyepa uchiedza kuvhariridza zvinoita kuti vabereki vako vasatombokuvimba. Asi kana vachiziva kuti unotaura chokwadi uye unobvuma paunenge wakanganisa, vachaona kuti wakura. Izvozvo ndizvo zvinoita kuti vavimbe newe.
“Kukanganisa handiko kunoita kuti vabereki vako vasakuvimba, asi kuedza kuvhariridza zvaunenge wakanganisa ndiko kunoita kuti vasakuvimba.”—Anna.
Bhaibheri rinoti: ‘Tinoda kuva vakatendeseka muzvinhu zvose.’​—VaHebheru 13:18.
Zvekufunga nezvazvo: Vabereki vako pavanokubvunza kwauri kuenda nezvauchanoita ikoko, unotaura chokwadi here, kana kuti unosiyirira zvimwe?
Ratidza kuti unoziva zvauri kuita. Teerera mitemo yese yaunopiwa. Ita basa rako repamba paunongoripiwa. Bata nguva. Usamirira kuudzwa kuti uite homuweki. Svika pamba nenguva.
“Kana vabereki vako vakakubvumidza kunotamba neshamwari dzako vokuti 9:00 dzemanheru dzinofanira kuchaya wadzoka, iwe wozodzoka zvako na10:30, haungatarisiri kuti vazokubvumidzazve kunotamba neshamwari dzako!”​—Ryan.
Zvekufunga nezvazvo: Vabereki vako vanokuziva here semunhu anobata nguva, anoita mabasa epamba achipedza uye anoteerera mitemo yavo kunyange yausingafariri?
Iva nemwoyo murefu. Kana wakamboita zvinhu zvakaita kuti vabereki vako vasakuvimba, zvichatora nguva kuti vakuvimbezve. Mirira.
“Pandakanga ndati kurei, ndairwadziwa chaizvo kuti nei vabereki vangu vachiri kundirambidza kuita zvimwe zvinhu. Handina kuziva kuti kukura muzera kwakasiyana nekukura mupfungwa. Ndakakumbira vabereki vangu kuti vandipe mukana wekuvaratidza kuti vanogona kuvimba neni. Zvakatora nguva asi zvakashanda. Ndakadzidza kuti kukura handiko kunoita kuti uvimbwe newe asi kuti zvaunoita.”—Rachel.
Bhaibheri rinoti: “Rambai muchizviedza kuti muone kuti makadini.”​—2 VaKorinde 13:5.
Zvekufunga nezvazvo: Kuti vabereki vako vakuvimbe, zvii zvaungaita kuti uratidze kuti wakavimbika?
ZANO: Edza kubata nguva, kupedza mabasa epamba, kudzoka kumba nenguva kana kuti zvimwewo. Udza vabereki vako kuti unoda kuita zvavanokuudza wovabvunza kuti ndezvipi zvimwe zvavanoda kuti uite kuti vakuvimbe. Chibva washanda nesimba kuti utevedzere zano reBhaibheri rekuti: ‘Bvisai unhu hwekare hunotsinhirana nowaimbova mufambiro wenyu.’ (VaEfeso 4:22) Nekufamba kwenguva, vabereki vako vachaona kuti uri kuchinja!
“Kana vabereki vako vakupa rusununguko rwekuita zvimwe zvinhu chirega kubva warasa muswe. Gara uchivaudza zviri kuitika muupenyu hwako. Teerera mazano avanokupa. Vakaona kuti uri kuita zvisarudzo zvakanaka, vachawedzera kuvimba newe.”​—Phoebe.
“Unotofanira kushanda nesimba kuti vabereki vako vavimbe newe. Kana vasingakuvimbi panenge paine chiri kuita kuti vadaro. Pavanozokuvimba, vanenge vasiri kungozviitira kuti ndizvo zvaunotarisira kuti vaite. Vanenge vaona kuti wava kukwanisa kuita zvisarudzo zvakanaka.”​—Kyle.
“Gara uchiudza vabereki vako chokwadi uye uchikurukura navo. Usamirira kuti vaite zvekukubvunza zvinenge zvichiitika kwauri. Vaudze zvese. Kana ukadaro vachatanga kuvimba newe.”​—Cortlan.
“Usamirira kutumwa kuita mabasa epamba uye ita kunyange zvimwe zvavanenge vasina kukuudza. Svika pamba nenguva. Kana uchida kuti vabereki vako vavimbe newe, varatidze kuti wakavimbika.”​—Rachel.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaita Sei Kuti Vabereki Vangu Vavimbe Neni?
ijwyp nyaya 80